Mourinho oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya taageerayaasha Man United, kahor booqashadiisa garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 03 Dis 2019. Macalinka reer Portugal ee José Mourinho uu habeen dambe dib ugu soo laaban doono garoonka Old Trafford, isagoo hoggaaminaya kooxdiisa cusub ee Tottenham Hotspur, kaddib billooyin markii laga ceyriyay.
Manchester United ayaa habeen dambe ku soo dhaweynta garoonkeeda Old Trafford, kooxda Tottenham Hotspur, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 15-aad horyaalka Premier League ee dalka England.
José Mourinho ayaa sheegay inaysan wax cadaawad ah kala dhaxeynin kooxdiisii ​​hore ee Manchester United, isla markaana uu xilli kasta farxad ku dareemayay Red Devils.
Mourinho ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Manchester United wuxuu kula guuleystay koobka Carabao Cup iyo tartanka Europa League, wuxuuna kaalinta labaad kaga dambeeyay dhanka kala sareynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkiisii ​​labaad, laakiin xilli ciyaareedkii saddexaad ayaa waxaa xumaaday xiriirka kala dhaxeeyay maamulka Red Devils.
Macalinka reer Portugal oo shaqada laga ceyriyay 11 bilood iyo bar ka hor markii uu ahaa macalinka United-ka, ayaa ku laabashadiisa habeen dambe garoonka Old Trafford wuxuu doonayaa inuu sameeyo kulan weyn.
Haddaba José Mourinho shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka habeen dambe wuxuu sheegay:
“Waxaan dhihi karaa waxaan xiriir wanaagsan la lahaa taageerayaasha kooxda Manchester United”.
“Kaddib markii aan ka tagay kooxda waxaan u jeestay falaqeynta ciyaaraha oo waxay igu qaadatay waqti badan si aan uga hadlo wax walba oo dhacay, isla markaana aan isu diyaariyo inaan ka hadlo waxa xiga, xaqiiqdii Manchester United waa wax laga soo tagay”.
Tababare Frank Lampard oo xaqiijiyay haddii uu Tammy Abraham diyaar u yahay kulanka habeen dambe ee Aston Villa